Lisuka liyahlala kusasa ku-Absa Premiership – Bayede News
Lisuka liyahlala kusasa ku-Absa Premiership
INTAKA ibekelwe amazolo ngempelasonto njengoba lisuka
by Bayede-News Posted on 4 August 2019
Ukaputeni weSupersport uDean Furman uxhawulana nokaputeni weSundowns uHlompo Kekana ngaphambi komdlalo wakusasa. Ngezansi indebe edlalelwayo.
INTAKA ibekelwe amazolo ngempelasonto njengoba lisuka lihlala ku-Absa Premiership kusasa. Zihlukene izimfuno zamaqembu, amanye azolwela ukunqoba isicoco seligi, amanye azolwela ukungena kweyase-Afrika, amanye azolwela ukuba kuTop 8, amanye azolwela ukuvika izembe.Umdlalo obhekwe ngamehlo abovu owezimbangi zaseTshwane lapho iMamelodi Sundowns evikela isicoco yamukela iSupersport United kusasa eLucas Moripe Stadium ngehora le-15:00.
AmaBrazillians (iSundowns) asasayinise umdlali oyedwa okwamanje okunguMauricio Affonso odabuka e-Uruguay kanti iSupersport isayinise uThamsanqa Gabuza noKudakwashe Mahachi ebathenge ku-Orlando Pirates.Ngawo uMgqibelo iBaroka uzokwamukela iCape Town City i-Old Peter Mokaba Stadium, omakoti ku-PSL iStellenboch bazovakashela iChippa United eNelson Mandela Bay Stadium.
Yomibili le midlalo izoqala ngehora le-15:00. Amabhakabhaka (i-Orlando Pirates) azotholana phezulu neBloemfontein Celtic, ehlaselwe izinkinga, e-Orlando Stadium ngehora le-18:00.Ezimnyama ziqede endaweni yesibili ngesizini eyedlule. Ngenhloso yokunqoba iligi kule sizini zisayine abadlali abafaka oGabadinho Mhango, uSiphesihle Ndlovu noFortune Makaringe. Azoya kulo mdlalo ukuzethemba kuphezulu emveni kokunqoba iCarling Black Label Cup.Umdlalo wokugcina ngoMgqibelo ngehora lama-20:15 iBidvest Wits eyaqeda endaweni yesithathu ngesizini eyedlule izogadulisana na-AmaZulu eKing Zwelithini Stadium.
Ngesonto iKaizer Chiefs izobhekana neHighlands Park eMakhulong Stadium. IBlack Leopards izokwamukela iPolokwane City eThohoyandou Stadium.Umdlalo wokugcina iMaritzburg United izovakashela iGolden Arrows eSugar Ray Xulu Stadium eClermont. Yonke le midlalo izoqala ngehora le-15:00.Imidlalo yonke izokhonjiswa eziteshini ezihlukene zethelevishini nasemisakazweni ezweni lonke.